Ralison Andriamandranto: Hamerina ny hasin’ny fitantanana ny tanàna
lundi, 07 octobre 2019 19:51
Taorian’ny nidiran’Atoa Eric Rakotoarisoa, filohan’ny HCC ankehitriny teo amin’ny sehatry ny politika dia mirona any amin’izany ihany koa ankehitriny Atoa Andriamandranto Ralison. Fantatry ny maro tamin’ny fitarihany ny SeFaFi (Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena) moa izy ireo, izay samy mpikambana tamin’io fiarahamonim-pirenena io avokoa, ary fantatra tamin’ny fanankianana mavaivay ny mpitondra tamin’izay fanehoan-kevitra navoakany.
Tapa-kevitra ny nirotsaka ho kandidà Ben’ny Tanana eto Antsirabe, renivohitr’i Vakinankaratra Atoa Ralison Andriamandranto ankehitriny. Vina ho azy ny famerenana ny hasin’ny fitantanana ny tanàna hisian’ny fihavaozana marina, mba ho tanàna fitaratra eto Madagasikara i Antsirabe ka hametrahany fomba fiasa amin’ny fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny fanjakana sy ny mponina ary ny tompon’andraikitry ny tanàna.
Isan’ny laharam-pahamehana ho azy ny fanabeazana olom-pirenena, fampananan’asa ny tanora, tohana ho an’ireo olona manana fahasembanana ary ny fijerena manokana ireo filàn’ny mponina eto Antsirabe.
Nambarany fa mila fanavaozana ny rafim-pitantanana sy ny fampanjariana ny fitaovam-pitantanana sy ny fampidiram-bolan’ny Kaominina Antsirabe, ny fanadiovana ny tanàna, sy ny fampiroboroboana ny kolontsaina sy ny fizahantany eto Antsirabe.
Nihaona tamin’ireo mpomba azy tao amin’ny Imperial Hôtel izy ny sabotsy teo. Isan’ny handrindra ny fampielezan-keviny ny Talen’ny Kabinetra teo aloha an’ny Ben’ny tanana, Paul Razanakolona.
Izy dia kandida tsy miankina.